Chii chinonzi Bitcoin Benefit - Nezvedu
Chii chinonzi Bitcoin Benefit?
Bitcoin yaive hasha dzese paakatanga kuziviswa kumisika yepasirese yezvemari muna2009. Mushure meizvozvo, pakave nemamwe akawanda madhijitari akasunungurwa. Musika we cryptocurrency wese wakakwira kubva ipapo, neBitcoin ichisvika pakukosheswa kwenhoroondo kungori pasi pemadhora zviuru makumi maviri na2017. Dai iwe uri mumwe wevakakomborerwa vakaisa mari mukutanga mari yemadhora, ungadai wakawana purofiti yakawanda. Vamwe vanhu vakatozoita mamirionea ekuzvigadzirira.
Nekudaro, dai iwe usiri mumwe wevatanga mari ye cryptocurrency, hazvisati zvanonoka kuti iwe utore mukana wemusika unonakidza uyu. Mutengo weBitcoin uye yasara yeiyo cryptocurrency musika wakaisirwa kukoshesa nekuda kwekuwedzera kwekugamuchirwa kwemakristpto mari muhurongwa hwepasirese hwemari. Izvi zvinoguma nekuwedzera kudiwa kwemakristpto mari izvo zvinokonzeresa kumusoro kumanikidza pane kukosha. Naizvozvo, kune yakawanda purofiti ingangoitika mumari yemadhora mune ramangwana.
Saina yako yemahara account ne Bitcoin Benefit uye tanga kugadzira isingachinji purofiti!
JOINA IZVOZVI - VHURA YEMAHARA DZOKUDZIDZA ACCOUNT
Pfungwa ye Bitcoin Benefit yakazvarwa pamusangano weindasitiri yezvemari inotarisana neimwe nzira yekudyara mari. Apa ndipo patakaunganidza timu ye Bitcoin Benefit iyo inoumbwa nevezvehupfumi vepamusoro, vatengesi vehunyanzvi, vaongorori vehunyanzvi uye nyanzvi dzemakomputa. Isu tese takafunga kuti isu taida kubatsira vanhu vezuva nezuva kuti vabudirire mumisika ye cryptocurrency.
Mhedzisiro yacho yaive yeakanakisa, otomatiki ekutengesa software zvirongwa zviripo pamusika. Isu takavewo nechokwadi chekuti vatengesi vezviitiko zvese vane ruzivo vanokwanisa kushandisa software kuti vaite mari yekungoita. Iyo otomatiki software inoongorora misika ichishandisa akasiyana maekisheni ezvehunyanzvi kuitira kuti ipe 99.4% chaiyo chiyero. Ino yave nguva yekuti utange kutengesa Bitcoin uye mamwe ma cryptocurrencies zvinobatsira.
WAKADZIDZA KUTI KUTAURA KUITA RUDZIDZO?
SIGNUP YEMA Bitcoin Benefit ACCOUNT IZVOZVI!